Macallinka: Warka Dugsiga ee Hadda
Tifaftiraha Ugu Dambeeya ee Shaqaalaha Tifatiraha
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka on July 28, 2021	• 2 Comments
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka on July 28, 2021	• 684 Comments
Qorista Difaaca Madaniga 2021: Miyaad hadda raadineysaa qorista difaaca madaniga ama wararka qorista NSCDC ee 2021? Miyaad dooneysaa inaad ka dalbato qorista difaaca madaniga 2021 bogga www.nscdc.gov.ng/recruitment 2021? Hadday haa tahay, wax dheeri ah ka baro difaaca shacabka adoo si hoose u aqrinaya. Qorista Difaaca Madaniga ee 2021 waa mid socda oo socda! Si dhakhso leh wax uga baro Nigeria […]
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka on July 28, 2021	• 50 Comments
Qorista EcoBank 2021: Ma waxaad dooneysaa inaad ka shaqeyso Ecobank Plc sanadkaan? Hadday haa tahay, wax walwal ah kama qabtid. Boggan ayaa kugu hagi doona tallaabada tallaabo tallaabo ah ee sida loo dalbado shaqooyinka Ecobank ee Nigeria ee qalin-jabinta iyo shahaadada koowaad. Waxaad baran doontaa wax ku saabsan sharaxaadda shaqada ee Ecobank, xirfadaha dalabka, shuruudaha iyo […]
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka on July 28, 2021	• 407 Comments
Foomka Shaqaalaynta Ciidanka Booliska Nigeria ee 2021 ayaa soo baxay! Baro sida loo dalbado qorista Booliska Nigeria 2021/2022 dhammaan jagooyinka. Qaadashada qorista Booliska Nigeria waxay u furantahay kuwa haysta shahaadada WASSCE / GCE / NECO / NABTEB. Codsiga gabi ahaanba waa BILAASH. Qorista Ciidanka Booliska Nigeria (NPF) waxay sugayeen dalka ilaa maanta. Marka, waxaan helnay codsiyo badan oo ay […]
Filed in Job by Shaqaalaha tifaftirka on July 28, 2021	• 1 Comment
UNILORIN Foomka Ogolaanshaha Dib-u-habeynta: Jaamacadda Ilorin, UNILORIN waxay hadda iibineysaa foomka dalabka oggolaanshaha barnaamijka Remedial / Pre-degree ee kal-fadhiga tacliinta ee 2020/2021. Sii wad akhriska si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah hoosta. Codsiyada waxaa lagu martiqaaday musharrixiinta ku habboon ee u qalma gelitaanka 2020/2021 casharka akadeemiyadda ee Barnaamijka Barashada Daraasaadka Dugsiga. Caawinaad la ogolaaday […]